Myat Shu - 2012 July
You are here : Myat Shu » Archives for July 2012
Published By Myat Shu On Sunday, July 29th 2012. Under ၀တ္ထု, စကားပြေလက်ရာသန့်, မျက်ရှု
အင်းဝရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ ထိုစဉ်က တုန်လှုပ်ချောက်ချားလျက် ရှိနေသည်။ သို့သော် မြို့တော်သူ မြို့တော်သားများကား ဣနြေ္ဒမပျက် သွားလာ လုပ်ကိုင်လျက်ပင် ရှိ၏။ စိတ်ထဲ၌သာ ဘယ်တော့ ပြေးရလွှားရ ဖြစ်မည်လဲဟု တထင့်ထင့်နှင့် နေကြရသည်။ တိုင်းတော်ပြည်တော်၏ အခြေအနေ ဆိုးရွားမှု လုံးဝ မရှိ။ ဘုန်းတော်ကြောင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားကာ သူပုန်သူကန် တောပုန်းဓားပြ မရှိ။ ထို့ကြောင့် တိုင်းသူပြည်သူများ စိတ်အေးအေးနှင့် နေကြစေ။ အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင် မမှန်သတင်းလွှင့်သူများအား မင်းဒဏ်ခတ်မည်ဟု ရွှေနန်းတော်ကြီးမှ အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းကြောင့်သာ မိမိတို့၏ စိုးရိမ်မှုများကို လူရှေ့သူရှေ့တွင် ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်း မပြုကြသော်လည်း “အိမ်ရှေ့စံကိုယ်တော်ကြီးဖြင့် ရွှေပြည်တော်မှာ မရှိတော့ဘူးတဲ့၊ ထွက်တော်မူပြီး လူစုနေပြီတဲ့” ဟု အချင်းချင်း တီးတိုးပြောသူပြော၊ ... Continue Reading
စာအုပ်၊စာပေ၊စာနယ်ဇင်း (သားသို့ပေးစာ – ၇)
Published By Myat Shu On Sunday, July 22nd 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေးရဲဝဏ္ဏ… ကျောင်းတွေဖွင့်နေပြီဆိုတော့ အတန်းသစ်မှာ သင်ရမယ့် ဖတ်စာအုပ်အသစ်၊ မှတ်စုစာအုပ်အသစ်တွေ သားလေးရထားပြီနော်။ စာအုပ် (Book) လို့ သားငယ်ငယ် ကျောင်းမနေခင်ကတည်းကသိခဲ့ရတဲ့ (Book) ဆိုတာလေးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိအောင် ဖေဖေပြောပြချင်တယ်။ စာအုပ်ဆိုတာ စာရွက်တွေကို စုချုပ်ထားတဲ့ အရာလို့ သားမှတ်ထားနော်။ အဲ့သည်စာရွက်ဆိုတာ မပေါ်ခင်က ပေရွက်ပေါ်၊ ကျောက်သားတွေပေါ် ရေးထွင်းခဲ့ကြရတယ်။ စာရေးရတာ ခက်ခဲတဲ့အပြင် သယ်ယူရ ခက်တဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြောင့် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ စက္ကူဆိုတာကို တီထွင်လာကြရာက စက္ကူတွေကို စုချုပ်လိုက်တဲ့အခါ စာအုပ်ရယ်လို့ ဖြစ်လာတာလေ။ စာအုပ်တွေသာ မရှိခဲ့ရင် လူသားတွေရဲ့ အသိပညာတွေ၊ တီထွင်မှုရလဒ်တွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ၊ အနုပညာ စွမ်းပကားတွေ ဘယ်လိုမှ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သားတို့၊ ဖေဖေတို့ လူသားတွေလည်း ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, July 18th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
သရုပ်ဖော် - ဆြာထိန် (၁) နွေဂိမှန် သမယ ညနေချမ်း၏ ဖျော့တော့သော ဆည်းဆာရိပ်အောက်တွင် ရွေးမြစ်ရေပြင်သည် တငြိမ့်ငြိမ့် စီးဆင်းနေလေ၏။ ရောင်ခြည် တစ်ထောင်ကို ဆောင်သော ဒေါင်းစကြာ နေ၀န်းသည် အလင်းရောင် အကြွင်းအကျန် အကပ်အသပ် အချို့ကို မြစ်ပြင်ပေါ်သို့ အန်ချထား၏။ ဆည်းဆာ၏ တောက်စားမှုကြောင့် တဖျတ်ဖျတ် တလက်လက် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် အရောင်အဆင်းဖြင့် လင်းလက် တောက်ပနေသည့် ကြက်သွေးရောင် မြစ်ရေပြင်သည် လှချင်တိုင်း လှနေတော့သည်။ ထိုအခိုက်တွင် နွေ၏ ဖွားဖက်တော် လေပွေရူးသည် ဓနိတောကို ဖြတ်သန်း၍ တိုက်ခတ်လာပြီးလျှင် တငြိမ့်ငြိမ့် စီးဆင်းနေသော မြစ်ပြင်ကျယ်အား တသိမ့်သိမ့် လူးလွန့်စေ၏။ လေပွေရူး၏ အရှိန်အဟုန်ကြောင့် မြစ်နဂါးကြီး မှေးစက်ရာမှ ဗြုန်းခနဲ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, July 14th 2012. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
သိပ္ပံမောင်ဝ ခေတ်စမ်းသမားမဖြစ်မီ ၁၉၃၆ ခုနှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ စာတမ်းတစောင် ဖတ်မိတယ်။ စာတမ်းအမည်က “မြန်မာမိန်းတို့၏ အခြေအနေအကြောင်း” တဲ့။ သိပ္ပံမောင်ဝရဲ့ Feminism နဲ့ Gender အပေါ် အဲဒီခေတ်က အမြင်လို့ ပြောနိုင်မယ့် စာတမ်းပါ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ ပညာရေး၊ တရားဥပဒေအရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရေးမှာ မိန်းမတို့ အခြေအနေတွေကို အခန်း ၅ ခန်းနဲ့ ရေးပြထားတာမို့ ဒီနေရာက အကျဉ်းသဘော အဲဒီခေတ်ကာလ အမျိုးသမီးများ အခြေအနေကို မြင်သာအောင် ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် မြန်မာမိန်းမတို့၏ အခြေအနေ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသူများ အိမ်တွင်းပုန်းတာနဲ့ အနောက်နိုင်ငံသူများ ပွင့်လင်းလွန်းတဲ့ အစွန်းနှစ်ဖက်ကြားလို့ သိပ္ပံမောင်ဝက သုံးသပ်ပါတယ်။ “အပျိုဖော် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, July 3rd 2012. Under မျက်ရှု, နှလုံးသားစာမျက်နှာ
တညမှာ စိတ်တွေ ပွန်းပဲ့တဲ့အခါ မှီခိုမိတော့ ရင်ဘတ်ချင်း စာချုပ်ချုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေက နှိပ်စက် အိပ်ပျက် သိပ်ခက်တဲ့အခါ အချိတ်အဆက်ကို ဒိတ်နဲ့ ရက်တွေ ကျားကွက်ရွှေ့ချင်တယ်။ သင်ကာ ... Continue Reading